We.com.mm - ကိုယ့်ချစ်သူကို Public မထုတ်ပြချင်သူတွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းများ
ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရေးကိစ္စတွေကို လူသိရှင်ကြား အကုန်ဖွင့်ချတတ်တဲ့သူတွေရှိသလို အကန့်အသတ်လေးတွေ ထားပြီး လျှို့ဝှက်စွာ တွဲတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ဘာကြောင့် လျှို့ဝှက်ရလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီး ရှိမှာပေ့ါ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ မိမိရဲ့ personal တွေ ကို social media ပေါ်မှာ အကုန်လျှောက်တင်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လျှိုသင့်တာတွေကို လျှိုရမယ်လေ။ ကိုယ့်မှာ ချစ်သူရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ သူများတွေကို လျှိုထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပါ။
လက်ကို ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပြီး ရိုက်ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မျက်နှာကို အုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
Mask အုပ်ပြီး ရိုက်မယ်
မသိရင် ဆယ်လီလိုလို၊ သွေးကင်ဆာရှိသလိုလိုပေါ့။ ?? Mask အုပ်ပြီး ရိုက်တာလည်း ရိုက်တတ်ရင် အထာကျတယ်နော်။ အထင်မသေးနဲ့။
အရိပ်ကို ပုံစံလေးတွေဖော်ပြီး ရိုက်တာက ပျော်စရာလည်းကောင်းသလို ရိုမန်းတစ်လည်း ဆန်ပါတယ်။ အရိပ်ဆိုတော့ ကိုယ်လိုရာပုံသွင်းလို့ရတယ်လေ။ အရပ်ပုနေလည်း ရှည်အောင် ပုံဖော်လို့ရတယ်။
လက်သန်းချိတ်တာ၊ လက်ကိုကိုင်စုတ်တာ ကြိုက်သလို လုပ်လို့ရပါတယ်။ Couple Ring လေးဘာလေး ဝတ်ပြီး ရို လို့လည်း ရတာပေါ့။
ဦးထုပ်ကြွားသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးတွေကိုကာတာပေါ့နော်။ ?? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလည်း အထာကျတာပဲလေ။
ဦးထုပ်မရှိလည်း အနားမှာ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့သာ ကာလိုက်။ မျက်နှာတွေ မမြင်ရရင် ပြီးတာပဲ။
ရှုခင်းလှလှလေးမှာ နောက်ကျောပေးပြီးရိုက်ပါ။ ရှုခင်းလှလှလေးလည်း ကြည့်ရ၊ ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးတွေလည်း မမြင်ရတော့ဘူး။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်။
Mirror Selfie ရိုက်တယ်ဆိုရင်တောင် မျက်နှာမမြင်ရအောင် ဖုန်းနဲ့ကာတာ၊ ဆံပင်တွေနဲ့အုပ်ထားတာ၊ ခေါင်းကို ငုံ့ထားတာမျိုးလေးတွေ ရိုက်ပါ။
မျက်နှာမမြင်ရအောင် ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပါ။ လက်နဲ့ကွယ်တာ၊ မှောက်ခုံလှဲတာ၊ အင်္ကျီနဲ့အုပ်တာမျိုးတွေ လုပ်ပါ။ ပေါက်ကရပုံတွေဆိုတော့ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်လေ။
ညနေစောင်းတို့၊ ဓာတ်မီးတိုင်အောက်တို့လိုမျိုး အလင်းမှိန်တဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ပါ။ မှောင်နေတော့ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့။ ??
မမြင်ရလေ ကောင်းလေ ဆိုတော့ ခပ်ဝေးဝေးကသာရိုက်။ မနီးမဝေးဆိုရင်လည်း မျက်နှာကို မမြင်ရအောင် ကင်မရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ကို လှည့်ထား။
ဒီလိုပုံလေးတွေက အတွဲတိုင်းရိုက်လို့ရတာပဲလေ။ အမြဲတမ်း Selfie ကြီးပဲဆွဲနေရတာ မပျင်းဘူးလား။ တစ်ခါတလေ အခုလိုမျိုးလေး မျက်နှာမမြင်ရအောင် ရိုက်ကြပေါ့။ ကိုယ်ရုပ်ဆိုးတာလည်း လူမသိတော့ဘူး။ ? FA တွေလည်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ခဏခေါ်ပြီး ရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရတာပဲနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့မှာလည်း အတွဲပုံရှိတယ်လို့ကြွားနိုင်ပြီလေ။ OK!
ချစ်သူကောင်မလေး (၈) မျိုး
ကောင်လေးတစ်ယောက် သင့်ကို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း(၃)မျိုး
ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၈) ချက်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကို နောက်ခံထားပြီး မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့စုံတွဲ